१२०% बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर १२०% बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
on: २० चैत्र २०७४, मंगलवार १७:११ मुख्य खबर, लगानी
१२०% बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले चालू आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासमा ३७ करोड २५ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले रू. ४९ करोड ८४ लाख आम्दानी गर्न सफल भएकाले नाफा बढेको हो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी १ सय १४ प्रतिशतले बढेर रू. २६ करोड ६३ लाख पुगेको छ । कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. १ अर्ब ९८ करोड छुट्याएको छ भने बीमा कोषमा रू. १ अर्ब २६ करोड जम्मा भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ४९ करोड ७६ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । साथै कम्पनीले १ सय २० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ दशमलव २६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको फागुन १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यो राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट अलग भई कम्पनी ऐन, २०६३ अन्र्तगत स्थापना भएको निर्जीवन बीमा कम्पनी हो ।
वर्गिकरणः निर्जीवन बीमा कम्पनी
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ८८१०
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. २२८५०
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ४९९५
१८० दिनको भारित औसत मूल्यः रू. १३१६८.७१
अध्यक्षः कमल कुमार श्रेष्ठ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः वीर विक्रम रायमाझी
प्रधान कार्यालयः रामशाहपथ, काठमाडौं
स्टक स्टिकरः आरबिसिएल
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा २ सय १० प्रतिशतबाट घटेर १ सय ३९ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जा रू. ९९ करोड ९२ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको चालू सम्पत्ति १९ प्रतिशतले बढेर रू. ३ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख पुगेको छ भने चालू दायित्व ४१ प्रतिशतले बढेर रू. १ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रहेको छ ।
कम्पनीको जारी बीमालेखको सङ्ख्या ७ हजार ७ सय ८८ र नवीकरण गरेको गरिएको बीमालेखको सङ्ख्या ३ हजार ३ सय ९६ रहेको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले २ सय ४४ जनालाई रू. ३ करोड ४३ लाख ८४ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । यस त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बीमाशुल्क आम्दानी, लगानी, एवम् जगेडा कोष सन्तोषजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । साथै कम्पनीको हालसम्मको व्यावसायिक तथा वित्तीय स्थिति व्यवस्थापनले प्रक्षेपण गरे अनुरुप भएको प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
कम्पनीको चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी(वार्षिक) रू. १ सय ३९ दशमलव ७०, मूल्य आम्दानी अनुपात ९६ दशमलव ९९, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. १ हजार ३ सय १६ दशमलव ८२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ८ सय ४३ दशमलव ११ रहेको छ । मङ्गलवार शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे १० गुणा छ ।
खरीद चापः कम्पनीको मङ्गलवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप २ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ३ सय ४० कित्ता शेयर खरीद र १ सय ६० कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
२ जनवरी २०१८ ३ अप्रिल २०१८
मैनबत्ती बिश्लेषणः कम्पनीकोे ५७ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा सेतो मारोबोजु आकृति बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः कम्पनीकोे ५७ दिनको कारोबारमा आरएसआई ओभरसोल्ड जोन (२७ दशमलव ८२ स्केल)मा छ । यसले शेयर विक्री चाप रहेको देखाँउछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीकोे ५७ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १ सय १९ दशमलव ०६ विन्दुमा छ । उतारचढाव उच्च रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीकोे ५७ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने र २६ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा तल छ । हालको मूल्य रू. ८ हजार ८ सय १० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ९ हजार २० मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने मूल्य सस्तिएमा रू. ८ हजार ७ सयमा टेवा पाउन सक्छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ९ मङ्सिर २०७५)
९ मंसिर २०७५, आईतवार ०७:२४
२ मंसिर २०७५, आईतवार १७:०९
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको साधारण सभा शुक्रवार
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १०:५८
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफामा २ गुणा वृद्धि
१ भाद्र २०७५, शुक्रबार ११:०७